Guyyaan har’aa kabajaa wagga tokkoffaa Iowa keessati sababa Covid-19 du’aniidha. Akka virus kun jalq | KWIT
Qorannoo bulti 14 Woodbury County keessati godhame 6.1% akka tae himan. Kunis akka biyyati guututi parsanti lamaan kan taruudha. Torbaan lama dura, parsantii 4.7% ture.
Akka state guututi namni waliigalatti hospitaala jiru 170 dha, hospitaala Sioux City lama keessa nama 15 jiru dabalate. Kunis guyyaa jimaata irraa nama 5 dabalateeti.
Talaalin clinic Mary J. Treflia Community House Wednesday, March 17th dhaaf qopheesu jiran. lakkoofsi galmeef ittiin bilbiltan 712- 258 5137 dha. Guyyaa galmee kan dhumaa March 15th dha.
Nebraska Governor Pete Ricketts akka jedhanitti seera Covid-19 irrati haguugi fuulaa fi talaali corona virus irrati seera akka jijjiiru himan.
Ayyaana Easter kan April 4th dhufaa jiru irrati matiin wayta walgahan seera corona virus akka hordafuu qaban himan.
CDC akka jedhetti namni talali corona virus lamaanu fudhatte erga guyyaa 14 taa’e booda haguugi fuula osoo hin godhatin namaan walgahuu akka danda’an himan. Dabalataan, namni talaali corona virus lamaanu fudhate nama corona virus nama qabame waliin yoo wal’argan bulti 14 adda baafamnii taa’u akka hin barbaachifne himan.